सल्यानको कुपिण्डे तालको सौन्दर्यता ! (फोटो फिचर) – HostKhabar ::
सल्यानको कुपिण्डे तालको सौन्दर्यता ! (फोटो फिचर)
by बामदेव के.सी.
सल्यान : जिल्ला संघीय गणतन्त्र नेपालको कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जिल्ला हो । उच्चता र गहनताको देश भित्र एउटा अलौकिक स्वर्गको टुक्रा हो सल्यान । प्राकृतिक, धार्मिक, एंव सांस्कृतिक हिसाबले सल्यान जिल्लाको स्थान निकै उच्च छ ।
जिल्लाका प्राकृतिक पर्यटकिय क्षेत्रहरु मध्य जिल्लाकै एक महत्वपुर्ण पर्यटकीय स्थल कुपिण्डे ताल हो । जसलाई कर्णाली प्रदेशमा मिनी रारा भनेर पनि चिन्न गरिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट पुर्वी उत्तरी भागमा रहेको कुपिण्डे पुग्न छिन्चु, मेलकुना हुँदै सल्यानको बालुवासंग्रही आएर खलंगा आउने पुर्वी भागको उकालो सडक हिडेपछि पुगिन्छ । साविकको राप्ती अन्चलको तुलसीपुरबाट राप्ती राजमार्ग हुँदै सल्यानको प्रमुख व्यापारी केन्द्र श्रीनगरबाट खलंगा, जयतपानी हुँदै पनि यो ताल पुग्न सकिन्छ ।
चारैतिर पहाडले घेरिएको र बिचमा नीलो पानीले भरि भराउ रहेको कुपिण्डे तालले त्यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई पनि मोहित बनाएरै पठाउँछ । वरिपरि मिलेका पहाड, हरियो जंगल र बिचमा नीलो आकाशझैं उत्तर दक्षिण फैलिएको यो ताल प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण छ ।
वर्षा , हिउँद र गर्मी याममा मौसमपिच्छे यो तालले परापुर्वकाल देखि वर्षमा ३ वटा रङ्ग बदल्ने विश्वास गरिन्छ । गत वर्ष तालको गहिराई नापेको सेफोक्सुन्डो मिडिया प्रालिले कुपिन्डे दहको गहिराइ ६९ मिटर, लम्बाइ १ हजार २ सय मिटर र चौडाइ ३ सय ५० मिटर रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
किम्बदन्ती अनुसार कुपिण्डे दह भएको स्थानमा ठूलो पहिले एउटा गाउँ थियो । गाउँमा एक दिन साधु भेषमा एकजना मानिस बासको खोजिमा गाउँमा आएछन् । धेरै घरमा बास माग्दा पनि उनले बास पाउन सकेनन् । निरासहुँदै एकजना वृद्धको घरमा उनी पुगेछन् । बासका लागि आफु आएको कुरा उनले सुनाए । घरमा रहेकी वृद्ध महिलाले आफ्नो घरमा खाना र बस्नका लागि केह प्रबन्ध हुन नसक्ने बताए पनि साधु त्यही घरमा बसे ।
वृद्धको गरिबी थाहा पाएपछि भोलिपल्ट बिहान साधुले ती वृद्ध महिलालाई भनेछन् । म कैलुवराह हुँ । अरुलाई बास बस्न नदिने यो गाउँका पापीलाई म छिनभरमा डुबाइदिन्छु । अहिलेको कुपिण्डे दहतर्फको पहाड देखाउँदै भनेछन, ‘त्यो पहाडसम्म जाऊ । हिँड्दा पछि फर्किएर नहेर्नु ।’ महिला पहाडतर्फ लागिन । पहाडको चुचुरोमा पुगेर पछि फर्किएर हेर्दा सबै गाउँ पानीले भरिएको दह भएछ ।
वर्षेनी कुपिण्डे तालसँगै जोडिएको मन्दिरमा पूजाआजा गर्न टाढा–टाढाबाट भक्तजनहरु समेत आउने गर्दथिए । तर कोरोना भारसको महामारीले गर्दा देश लकडाउन भएछि अहिले विभिन्न ठाउँबाट आउने पर्यटकको संख्या घटेको हो ।
तस्विर बामदेव के.सी.
फोटोहरु : बामदेव के.सी.